एमसिसी पास गराउन भन्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री काठमाडौंमा, के गर्लान देउबा, प्रचण्ड ? — Imandarmedia.com
एमसिसी पास गराउन भन्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री काठमाडौंमा, के गर्लान देउबा, प्रचण्ड ?
काठमाडौँ। अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लु बुधबार साँझ काठमाडौं आइपुगेका छन् । विदेश मन्त्रालयमा उनी मातहतकी उपसहायकमन्त्री केली केइन्डरलिङ बिहीबार आइपुग्दै छिन् ।
समसामयिक विश्व मामिला, एमसिसीसहित नेपाल अमेरिका सम्बन्धका विषयमा छलफलका लागि लू आइपुगेका हुन् । जो बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अधिकारीहरू फेरबदल भएसँगै उनीहरूको यो पहिलो परिचयात्मक भ्रमण हो ।
उनीहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्कालगायत उच्च अधिकारीहरूसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ।
उनीहरूको मूलतः परिचयात्मक भ्रमण हो, तर एमसिसीलगायत समसामयिक मुद्दामा पक्कै पनि छलफल हुनेछ,’ अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारीले जानकारी दिए, ‘मुख्यतया जलवायु परिवर्तन, कोभिड–१९ महामारीमा सहकार्य र लोकतन्त्रको सबलीकरणलगायतका विषयमा औपचारिक कुराकानी हुने जानकारी आएको छ।
यसअघि एमसिसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन् । अमेरिकाले एमसिसी सम्झौता संसद्बाट शीघ्र पारित गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । सुमारले एमसिसी सम्झौतालाई राजनीतिक विषय नबनाउन आग्रहसमेत गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक सहमति बनाएर एमसिसीबारे निर्णय गर्ने चिठी अमेरिकी सरकारलाई पठाएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले भने यथास्थितिमा एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न नसकिने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । ‘अहिले एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित हुन सम्भव छैन भन्ने कुरा अमेरिकाले बुझेको छ । तर, फेरि पनि सबै पक्षलाई त्यसबारे स्पष्ट पार्ने प्रयत्न हुनेछ,’ अमेरिकी दूतावास स्रोतले भन्यो ।
नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रपति जो बाइडेनका उच्चतम प्राथमिकताहरूका सन्दर्भमा भ्रमण हुन लागेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । दुई देशबीच १२ वैशाख ००४ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो ।
नेपालले ०१४ मा अमेरिकामा र अमेरिकाले ०१५ मा नेपालमा दूतावास स्थापना गरेका थिए । बेलायतपछि नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको दोस्रो मुलुक अमेरिका हो, त्यतिवेला भारत बेलायतबाट स्वतन्त्र भइसकेको थिएन ।
सहायक विदेशमन्त्री लूले पाँच मध्यएसियाली मुलुक काजकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र उज्वेकिस्तान तथा दक्षिण एसियाली मुलुकहरू नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदिभ्स र अफगानिस्तानसँग अमेरिकी सम्बन्ध हेर्दै आएका छन् ।
किर्गिस्तान र अल्बानियाका लागि अमेरिकी राजदूत भइसकेका लूले दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासमा उपनियोग प्रमुखका रूपमा पनि कार्य गरेको अनुभव छ । सहायकमन्त्री लूले डिसेम्बरमा अमेरिका आयोजना हुने विश्व प्रजातन्त्र सम्मेलनमा सहभागी हुन,
प्रधानमन्त्री देउवालाई निमन्त्रणा दिने कार्यक्रम रहेको कूटनीतिक स्रोतले बताएको छ । नेपालमा भेटवार्ता सम्पन्न गरेर सहायकमन्त्री लु शुक्रबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।